Madaxweynaha Jamhuuriyadda “Soomaaliya Waxey Cagaha La Heshay Dhabihii Hormarka” – idalenews.com
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Soomaaliya ay cagaha la heshay dhabihii hormarka kadib kulan uu la qaatay dhigiisa dalka Mareykanka Brack Obama.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulammo kala duwan kula qaatay dalka Mareykanka Madaxda ugu sareysa dalkaasi sida Madaxweynaha iyo xogahayaha arrimaha Dibadda ayaa sheegay in Soomaaliya ay hada cagaha ku heyso dhabihii dib u dhiska iyo hormarka islamarkaana ay aduunka wax la qeybsaneyso.
“Soomaaliya waxey cagaha ku heysaa hada dhabaha dib u dhiska waayo Soomaaliya waxey ka guureysaa xaaladaha deganaansha la’aanta,burcad badeedda iyo wixii kale oo la mid ah waxeyna u guureysaa wado cusub oo hormar,iskaashi iyo wax wada qabsi ku dhisan”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shirjaraa’id ku qabtay magaalada Washington DC kadib kulan uu la qaatay dhigiisa dalka Mareykanka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tilmaamay in Dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyn doonto sidii wax looga badali lahaa muuqaalkii hore ee ay caalamku ka aamineen Soomaaliya islamarkaana caalamka lagu ogeysiin lahaa wadada cusub ee ay Soomaaliya gashay ay aduunku wax ula qeybsan lahaayeen.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn ugu mahad celiyey madaxda iyo shacabka Mareykanka sida ay usoo dhaweeyeen waxaana uu yiri “Dhammaan waad mahadsantihiin reer Ameerika”.
Socdaalka shaqo ee uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ku joogo dalka Mareykanka ayaa iminka u muuqda mid guul weyn laga gaaray maadaama uu Madaxweynuhu la kulmay madaxda ugu sareysa dalkaasi oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal.